Godzilla: King Of The Monsters (2019) On Myanmar Tube - Myanmar Subtitle Movies - မြန်မာစာတန်းထိုး - Myanmar Tube
Godzilla: King of the Monsters (2019) On Myanmar Tube – Myanmar Subtitle Movies – မြန်မာစာတန်းထိုး
Watching Godzilla: King of the Monsters Myanmar Subtitle Movies ( မွနျမာစာတနျးထိုး ) On Myanmar Tube
Godzilla: King of the Monsters မြန်မာစာတန်းထိုး
Titanတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ချင်တဲ့ Monarch ကို အစိုးရက သိပ် မကြည်ချင်တော့တဲ့အချိန်မှာ လူတွေဟာ ကမ္ဘာအတွက် infection ပဲလို့ ယုံကြည်နေတဲ့ လူတစ်ချို့ကလဲ ဝင်နှောက်လာပါတယ်။ ဒီအခါ ကမ္ဘာကြီးဟာ orca လို့ခေါ်တဲ့ စက်တစ်လုံးရယ်၊ ခေါင်းသုံးလုံးရှိတဲ့ King Ghidorah ရယ်၊ အခြား Titans တွေရယ်၊ ဇာတ်လိုက်ကျော် Godzilla ရယ် လူတွေရယ် အကုန်လုံးအတွက် စစ်မြေပြင် ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ အရင်ကားတုန်းက လူတွေဘက်က ဝင်တိုက်ပေးခဲ့တဲ့ Godzilla ကြီးက ဒီတစ်ခါကော တို့ဘက်က ဝင်တိုက်ပေးနိုင်ပါ့ဦးမလား။
ဂေါ်ကြီး! ဂေါ်ကြီး! ဂေါ်ကြီး!
Godzilla franchise ရဲ့ ၃၅ကားမြောက်၊ Legendary ရဲ့ Monsterverseရဲ့ ၃ကားမြောက်။
ဒီကားကို အကောင်းဆုံး enjoy လုပ်နိုင်ဖို့ကတော့ Godzilla ကို အားပေးဖို့ သွားကြည့်တာလို့ စိတ်သွင်းထားပါ။ ဂေါ်ကြီး ရေလယ် ကြမ်းပါတယ် ရမ်းပါတယ်။ King Ghidorah ကလဲ ပါချီပါချဲ့တော့ မဟုတ်လေဘူး။ Ghidorah ကြီးက တော်ရုံတန်ရုံဆိုမှဖြင့် King လို့ ဘယ် နာမည်ရလေမလဲနော့်။ အရင်ကားတုန်းက မိနစ်၂၀လောက်ထိ အကောင်မမြင်ရလို့ဆိုပြီး ကွန်ပလိန်းတက်ခဲ့ကြသူတွေအတွက် ဒီကားမှာ စထဲက အကောင်ကြီးတွေ မြင်ရမှာပါ။ ကလေးစကားနဲ့ ပြောရရင် အကောင်ကြီးတွေချည်းပဲ ချတာ တစ်ဝကြီးကြည့်ရတာပေါ့။ အရင်ကားတွေတုန်းက ဂေါ်ကြီးကို နု နဲ့ ထု သတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေ အမြင်မှန် ရပြီး တောက်လျှောက်ကြည့်လာတဲ့လူတွေအဖို့ closure လေး ပေးထားသေးတယ်။
ဒီလိုရုပ်ရှင်မျိုးက ဇာတ်လမ်းတွေ မသန်းတွေ သိပ်ပါစရာမလိုပဲ visually appealing ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ရှိန်ကျမသွားအောင် သယ်သွားနိုင်ရင် ကြည့်ကောင်းတာပါပဲ။ John Wick လိုပဲ ဂေါ်ကြီး ကြမ်းတာ လာကြည့်တာမလို့ ဂေါ်ကြီးကြမ်းတယ် ကျေနပ်တယ်ပေါ့။ ဒါတောင် သူ့ဟာနဲ့သူ အစပ်အဟပ်လေး မိလို့ မဆိုးဘူး ပြောလို့ရတယ်။ ဟယ် ဒီလောက် ရေဒီရေးရှင်းတွေနဲ့ ကင်ဆာမဖြစ်ကြဘူးလားတွေ ဘာတွေ မတွေးပါနဲ့လို့ပေါ့နော်။
တစ်ကားလုံးရဲ့ production quality က လုံးဝ top notch, top of the line လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ရိုက်ထားတဲ့ visual တွေကလည်း လှ၊ အသံတွေ၊ Music, VFX အကုန်အကုန်လုံးက လန်ထွက်ပြီး တစ်ကားလုံးကို edge of the seat လို့ပြောရအောင် အသက်အောင့်ပြီးကြည့်နေရတာမျိုး။ တစ်ခန်းပြီးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ကားလုံးပြီးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ် pew ဆိုပြီး သက်ပြင်းချနိုင်တာမျိုးဖြစ်မယ်။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ Godzilla size movie ကို ဒီလောက် quality လောက်ထိ ပေါမသွားပဲ ရိုက်ပြနိုင်တာ Production team တစ်ခုလုံးကို တကယ့် salute ပဲ။ Kong နဲ့ ဖိုက်တဲ့ကားကျ ဒီကားကိုကျော်ဖို့ တော်တော်လုပ်ယူရမဲ့သဘောမှာရှိတယ်။
မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင် ရုံမှာဖြစ်အောင်သွားကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီလိုကားမျိုးက ရုံမှာကြည့်ရတာနဲ့ TV တွေ ဖုန်းတွေမှာကြည့်ရတာ ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ပါဘူး။ တကယ့် Monster movie ကို တဝကြီးခံစားချင်ရင် big screen မှာ ကြည့်ဖို့သင့်ပါတယ်။
Godzilla ကားဆိုတော့ story တွေ logic တွေတော့ သိပ်မစဉ်းစားကြနဲ့ပေါ့။ အကောင်တွေဗြင်းတာ လာကြည့်တာပဲမလား။ ကိုယ်တွေတော့ ဒီအကွက်တွေ မြင်မြင်ချင်း တွေ့မိ စဉ်းစားမိပေမဲ့ ရုပ်ရှင်က ကောင်းတော့ ချက်ချင်းဆိုသလိုမေ့သွားတာပဲ။
IMDb Rating 6.1 95,678 votes
TMDb Rating 6.2 1,582 votes
Download HD 720p English 1.12 GB 36